PressReader - Kwayedza: 2017-10-06 - Tishamwaridzane
MURI kutsvaga shamwari yechirume kana yechikadzi here? Nyorai ku: Tishamwaridzane; Kwayedza, Box 396 Harare. Munogona kuunza matsamba enyu paHerald House muHarare kana kunyora paemail inoti: kwayedza@zimpapers.co.zw kana kutumira sms panhamba dzinoti: 071
Kwayedza - 2017-10-06 - Tishamwaridzane -
MAKADINI veKwayedza? Ndinotsvakawo murume wekuvaka naye musha, ndiri mukadzi ane makore 29 nemwana mumwe chete uye ndiri pamushonga. Ndinoda asingaratidzi kurwara. Nhare yangu 0712 156 106.
Ndiri murume ane makore 42 nevana 2, HIV negative uye ndinoshanda muHarare. Ndinotsvaga mukadzi anoda zvemba ari pachokwadi asi ngaave anoshanda. Andifarira ngaandibate pa0774 213 174 kana kutumira sms totaura.
Ndiri mukadzi ane makore 35 nevana 2, ndiri pamushonga uye ndinoita basa rekutengesa-tengesa. Ndinodawo murume ane makore 45- 55 ave kuda kuroora. Ndinogara kuMarondera, ndinobatika pa0775 828 372.
***** Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 asiri pamushonga, ndinoda mukadzi ane makore 20- 25 asati aroorwa. Ari pachokwadi ndibate pa0772 316 584.
***** Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 36, HIV+ uye ndine vana 2. Ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane vana vakewo ane makore 40-50 ari pachokwadi. Matsotsi nevarume vevanhu kwete. Ndinogara muHarare ndimo mandinoshandira, ndodawo asingataridzike kuti ari pamushonga. Andifarira ngaandibate pa0771 145 153.
***** Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 35 nevana vaviri, ndinodawo mukadzi ane makore 25 zvichidzika. Nhare yangu 0713 774 521.
***** Makadii veKwayedza? Ndingafara makashambadza shambadzo yangu. Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana vaviri. Ndiri HIV positive uye ndinotsvakawo murume ari HIV positive ane makore 38 kusvika 45 anoda zvekuroora kwete zvekutamba asi vane vakadzi vavo kwete. Nhamba dzangu dzinoti 0777 913 679.
Ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo
mudzimai ane makore 25 kusvika 30 ane mwana mumwe kana vaviri asi kwete mudhafu. Nhare yangu 0772 266 082. Ndinoshanda, handisi pamushonga uye ndinoda anoda kunoongororwa ropa.
***** Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume ane makore 33-37 ane mwana uye ari pachokwadi. Vanonwa kwete, andida ndibate pa0717 550 283.
***** Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvagawo mukadzi anoda imba ane makore 25 kusvika 30. Ane mwana mumwe kana asina ngaandibate pa0776 193 153.
***** Makadii vatsigiri vechirongwa? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mukadzi akanaka pameso nechimiro ane rudo. Ngaave ane makore 18 kusvika 26 asina mwana kana ane mwana heuno mukana! Andifarira fona kana kutumira sms pa0772 245 845.
***** Makadiii henyu? Ini ndiri mukomana ane makore 27 okuberekwa ndinotsvagawo musikana wekuroora naye asina chirwere. Ngaandibate pa0776 360 444.
***** Makadiii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 25 kusvika 34 angave nemwana mumwe. Andifarira ngaandibate pa0776 573 660.
***** Makadii? Ndiri murume ane makore 38 nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 18-30. Ari pachokwadi ndibate pa0771 295 873.
***** Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo
mukadzi ane makore 18 kusvika 22 wekuroora ane mwana
1. Ini ndine makore 25 uye asina mwana kwete. Ada nezvangu ndibate pa0777 335 988.
***** Makadii henyu? Ndiri mudzimai ane makore makumi maviri nemaviri, ndinotsvaga murume anoda kundiroora ane makore 23 kusvika
28. Akazvipira kuongororwa ropa ndibate pa0715 501 485.
***** Makadii? Ndiri murume ane makore 38 nemwana 1. Ndinotsvagawo mukadzi ane makore 18-30 ari pachokwadi. Nhare yangu 0771 295 873.
Ndiri murume ane makore 31, ndiri kutsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 20 kusvika 25. Ini ndinoshanda, ngaave ane mwana mumwe. Andifarira ngaandibate pa0785 446 677.
***** Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri murume ane makore 32 ndinotsvakawo mudzimai wekuwadzana naye ari pachokwadi. Ngaave ane mwana 1 kana asina ane makore 20- 27. Andifarira ngaandibate pa0777 065 705.
Ini ndiri musikana ane makore 20 okuberekwa, handina chirwere uye ndinotsvagawo mukomana anoda kuroora anoziva Mwari. Vanotamba kwete, ngaave ane makore 30 zvichidzika. Zvakawanda tozotaura pa0776 517 279.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 3 uye ndinotsvaga murume ari pachokwadi kwete wekutamba naye ari pamushonga uye anoda zvekuroora. Anoda vana vangu ngaandibate pa0778 028 808.
Ndiri mukomana ane makore makumi matatu nemashanu, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Andifarira anondibata pa0736 229 072.
***** Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 27 ndinoda mukadzi ane makore 20. Anotya Mwari ndibatei pa0776 407 492.
Ini ndinonzi Kundai, ndine makore 28 nevana 2 uye ndinogara kuMarondera. Ndinodawo murume ane makore 30 kusvika 45 asingarwari. Ane vana vake uye anoshanda akarongeka ngaandibate pa0735 588 632.
***** Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana vatatu, ndiri kutsvagawo murume anoda zvemba ane makore 45 kusvika 60. Andifarira anondibata pa0777 032 363.
***** Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 23 ari HIV positive asati oratidza kurwara nekuti ini ndakasimba. Ndinoshanda muHarare saka ngaave ari muHarare. Matsotsi kwete ndaneta navo, andida anofona kana kutumira sma pa0784 771 788 chero nguva.
***** Makadii? Ndinotsvagawo musikana ane makore 20-25 ari HIV positive sezvandiri asina mwana. Ndinoda ari pachokwadi ane zvaanoita muupenyu. Ndapota ndinoda anogara muHarare asi matsotsi nevanotamba musapedze nguva. Andifarira ngaandibate paWhatsApp, sms kana kufona pa0772 761 114.
***** Ndinokutendai veKwayedza, ndakawana wandaida saka ndinoti kune vachiri kufona panhamba idzi 0773 170 066 regai henyu zvakaita. Ndatenda.
***** Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 28 nemwana mumwe chete uye ndinotsvagawo mudzimai ane mwana 1 kana asina ane makore 18 kusvika 25. Ndinoshanda uye ndinogara kuRuwa, nhare yangu 0777 162 153.
Ndiri murume ane makore 43 ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi ane vana vaviri, ini ndine 4 asi ndinogara nemumwe chete. Ndiri HIV positive ndinoda ane makore 2535. Ari pachokwadi ngaandibate pa0736 145 884 asi vanoda kutamba neasati apedzerana nemurume wake kwete. Ndoda asina murume zvachose.
Ndiri mukadzi ane makore 33, HIV positive uye handishande. Ndine mwana 1, ndinoda murume anoshanda, anonamata ari pachokwadi. Ane makore 35-40 ane rudo fona pa0777 076 942.
***** Makasimba here? Ini ndiri mukadzi ane makore 40, ndinotsvagawo murume anondiroora ane makore 45 kusvika 60 nevana vaviri. Ndakambonyorera ndakasangana nevaive nevakadzi vawo. Nhamba dzangu 0774 193 667.
Ini ndakambonyorera tsamba yangu kuTishamwaridzane asi ndakashaya wandaida. Ndiri murume ane makore 50 okuberekwa, mudzimai wangu akashaika muna 2003. Handinwi mapiritsi, vana vangu vakura vozvichengeta. Ndinoda mudzimai ane makore 20 kusvika 30, ndiri kuMasvingo. Ndinoda mudzimai anobva Mutare, Chirumanzu, Mberengwa, Mwenezi, Chipinge neZvishavane. Anondida anondibata pa0774 582 300.
***** Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa uye ndinodawo murume ane makore 3555. Ndine vana vatatu, nhare yangu 0737 430 181. *****